Epsilon Variant Archives - IHarley Street Clinic eLondon Izibhedlela Ezihlola Izimfihlo Zezokwelapha
Kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- Septhemba 8, 2021 Ngu Umtholampilo waseHarley Street
Kusukela ngoSepthemba 2021 cishe 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Epsilon variant.
Ngokusho kwe-UCL phakathi neviki elifanayo, okuhlukile kwe-Episilon kube ngaphezu kuka- 80% yamacala amasha e-U.S. Ochwepheshe bezempilo bathi kuyinto ejwayelekile ukuthi uhlobo olusha lwegciwane lutheleleke kakhulu ngoba kaningi lusebenza kahle kakhulu futhi ludluliswa kalula.
Emiphakathini enamazinga aphansi okugoma, ikakhulukazi izindawo zasemakhaya ezingenakho ukuthola ukunakekelwa okulinganiselwe, the Epsilon variant could be even more damaging. Lokhu sekuvele kubonakala emhlabeni jikelele emazweni ampofu lapho umuthi wokugoma i-COVID-19 ungatholakali kalula. Ongoti bezempilo bathi umthelela ungazwakala emashumini eminyaka ezayo.
Uhlobo oluphambili lwe-COVID-19 lubuyisele emuva ekuvikeleni.
Ngokwalokho esikwaziyo manje, abantu abagonywe ngokuphelele nge-coronavirus bayaqhubeka nokuvikelwa okuqinile ku-COVID-19 uma kuqhathaniswa nalabo abangekho, yize i-UCL yeluleka ngokuqapha okungeziwe kufaka nemihlahlandlela yemaski ukuthi uyagonywa noma cha.
“Amacala okuphumelela,”Lapho abantu abagonywe ngokuphelele bathola i-COVID-19, kusabhekwa njengokungajwayelekile, even with UCL, ngokusho kwe-UCL, kodwa uma umuntu ogonyiwe ethelelekile, bangalidlulisa igciwane. (I-UCL iyaqhubeka nokuhlola imininingwane yokuthi abantu abanezifo zokuqhuma abangenazo izimpawu bangalisabalalisa igciwane.)
2. Abantu abangagonyiwe basengozini.
The most important thing you can do to protect yourself from Epsilon is to get fully vaccinated, kusho odokotela. Okwamanje, lokho kusho ukuthi uma uthola umuthi wokugoma wemithi emibili njengePfizer noma iModerna, Ngokwesibonelo, kufanele uthole isibhamu sobabili bese ulinda isikhathi esinconywayo samasonto amabili ukuze lezo zinhlamvu zisebenze ngokugcwele.
Kubalulekile ukukhumbula lokho, ngenkathi imithi yokugoma isebenza kahle kakhulu, abahlinzeki 100% ukuvikelwa, njengoba abantu abaningi begonywa, kungahle kube namacala amaningi okuphumelela, i-UCL ithi. Ngenkathi kube namacala okuphumelela esibhedlela, yonke imithi yokugoma isanikeza isivikelo esihle kakhulu ekuguleni okunzima, ukulaliswa esibhedlela nokufa, kusho i-ejensi.
Abantu abagonywe ngokuphelele bangathelela abanye, but the UCL also reports the amount of viral genetic material may decrease faster in vaccinated people—so, ngenkathi zitholakale zithwala inani elifanayo legciwane emakhaleni nasemphinjeni njengabantu abangagonyiwe, ucwaningo luye lwathola nokuthi zingasabalalisa igciwane isikhathi esincane kunalezo ezingagonyiwe.
Ukuthi ugonywe noma cha, kubalulekile futhi ukulandela imihlahlandlela yokuvimbela i-UCL etholakalayo yabantu abagonyiwe nabagonyiwe. Njengoba imizamo iqhubeka nokugoma abantu abaningi eU.S., i-UCL incoma “amasu okuvikela agqinsiwe,”Futhi lokho kubandakanya ukufaka izifihla-buso zobuso ezindaweni zasendlini zomphakathi ezindaweni zokudlulisa okukhulu noma okuphezulu, noma ngabe ugonyiwe noma cha. I-ejensi iphinde yancoma ukufihlwa ngasendlini kwendawo yabo bonke othisha, abasebenzi, abafundi, kanye nezivakashi ezikoleni ze-K-12.
“Njengakho konke empilweni, lokhu ukuhlola okuqhubekayo kobungozi,”Kusho uDkt. USmith. “Uma libalele futhi uzobe ungaphandle, ufake okokuvikela ilanga. Uma usembuthanweni ominyene, okungahle kube nabantu abangagonyiwe, ubeka imaski yakho bese ugcina ukuqhela komphakathi. Uma ungagonyiwe futhi ufanelekile ukuthola umuthi wokugoma, into engcono kakhulu ongayenza ukugoma. ”